Dhaqaalaha xilliga wakhtiga magan-gelyada | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / Dhaqaalaha xilliga wakhtiga magan-gelyada
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 7 8 2019
Boggagan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan sida aad isu dabari karto dhaqaale ahaan xilliga wakhtiga aad magan-gelyo ka raadsanayso Iswiidhan. Halkan waxaad xitaa ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan in la furto xisaab bangi.
Shaqee xilliga wakhtiga magan-gelyada
Waxaad heli kartaa fursada ah inaad adigu shaqayso ama bilowdo shirkad gaar kuu ah xilliga wakhtiga aad magan-gelyo doon ku tahay Iswiidhan. Waxaa kale oo jira qaabab badan inaad isu diyaariso inaad ka shaqayso Iswiidhan.
Halkan waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah kuna saabsan in la shaqeeyo xilliga wakhtiga aad magan-gelyo ka raadsanayso Iswiidhan.
Taageerada dhaqaale ee laga helo Hey'ada Socdaalka
Haddii aanad fursad u haysan inaad lacag shaqayso ama aanad haysan hantiyo kale waxaad taageero dhaqaale ka codsan karta Hey'ada Socdaalka.
Akhri dheeraad ku saabsan taageerada dhaqaale ee loogu talogalay magan-gelyo doonka kuna qoran Hey'ada Socdaalka bogeeda intarnatka.
Xilliga lagu jiro wakhtiga aad magan-gelyo ka raadsanaysid Iswiidhan waxaad fursad u heli kartaa inaad macmiil ka noqoto bangi oo hesho xisaab bangi iyo adeegyada kale ee bangi.
Halkan waxaa ku jira macluumaad dheeraad ah kuna saabsan bangiyada iyo sida aad adigu u furan karto xisaab bangi xilliga wakhtiga aad magan-gelyo ka raadsanayso Iswiidhan.